स्वस्थ यौन–जीवनका लागि आधुनिक विज्ञानले पुष्टि गरेका ७ खाना - Namaste Post
स्वस्थ यौन–जीवनका लागि आधुनिक विज्ञानले पुष्टि गरेका ७ खाना
नमस्ते पोस्ट २०७६, २ कार्तिक शनिबार ०९:४८ 0
एजेन्सी: घरमै पकाएको स्वस्थ, शुद्ध, सफा डिनरभन्दा राम्रो खाना त कहीँ हुदैँन।
‘खानामा पाइने केही भिटामिन र तत्वहरूले यौन क्षमता अभिवृद्धि गर्न र यौन अनुभवलाई सुन्दर बनाउन भूमिका खेलेको देखिएको बताउँछिन् बर्मन वुमन्स वेलनेस सेन्टरकी निर्देशक डा. जेनिफर आर. बर्मन। यहाँ केही खानाबारे चर्चा गरिएको छ, जसलाई आधुनिक विज्ञानले पुष्टि गरेको छः
आकारका कारण एज्टेकहरूको भाषामा एभोकाडो भन्नाले अण्डकोष बुझिन्थ्यो। एभोकाडो सन्तृप्त चिल्लो कम र असन्तृप्त चिल्लो अत्यधिक हुने हुनाले मुटुको स्वास्थ्यका लागि यसलाई निकै राम्रो खाना मान्ने गरिन्छ। मुटुलाई बलियो बनाउने खानेकुराले रक्त प्रवाहमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने हुदाँ स्वस्थ यौन जीवनका लागि एभोकाडो सेवन गर्नु उत्तम मानिन्छ। वास्तवमा मुटुरोगी पुरुषहरूमा इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन हुने सम्भावना दोब्बर हुन्छ।
बदामलाई पहिलेदेखि यौन चाहना बढाउने, यौन उत्तेजक खाना र प्रजनन क्षमता बढाउने खानाको रूपमा हेरिन्छ। वास्तवमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू तथा खनिज पदार्थहरू बदाममा पाइन्छ। बदाममा जिंक, सेलेनियम, भिटामिन ईजस्ता पदार्थहरू पाइन्छ। ‘जिंकले कामेच्छा बढाउँछ,’ डाक्टर बर्मन भन्छिन्, ‘बदामले कसरी काम गर्छ हामीलाई थाहा छैन, तर यसले कामेच्छा चाहीँ बढाउँछ।’
रातो रङ उत्तेजनासँग सम्बन्धित छ। एक अध्ययनमा निलो र हरियो रङभन्दा रातो कपडा लगाएका महिलाहरू पुरुषका आँखामा बढी सेक्सी हुने तथ्य पत्ता लागेको थियो। त्यसैगरी स्ट्रबेरी फोलिक एसिडको राम्रो स्रोत पनि हो। फोलिक एसिडमा भिटामिन बी हुनेगर्छ, जसले महिलाहरूमा जन्मदोषलाई कम गर्ने क्षमता हुने तथ्य क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको थियो। त्यसैगरी स्ट्रबेरी पुरुषहरूमा शुक्रकिटको संख्या पनि वृद्धि गर्दछ। चकलेटमा डुबाइएको स्ट्रबेरी निकै खानुहोस्। भ्यालेन्टाइन डे मा चकलेट त्यसै दिइने होइन, वास्तवमा चकलेटमा कामेच्छा बढाउने मेथिलजान्थाइन्स हुने गर्छ।
३. समुद्री खाना
चिप्लो र मसिनो बनोट र आकार भएपनि ओएस्टर सबैभन्दा प्रचलित कामोत्तेजक खाद्यपदार्थ हो। वास्वतमा ओएस्टरमा कामोद्दीपनका लागि आवश्यक जिंक अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ। अन्य समुद्री खानामा पनि यो तत्व पाइन्छ। उदाहरणका लागि सालमोन, हेरिङजस्ता चिल्लो पदार्थ अत्यधिक भएका माछाहरूमा ओमेगा ३ पाइन्छ, जुन स्वस्थ मुटु र स्वस्थ यौनजीवनका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
पहिलो शताब्दीदेखि नै उत्तेजक खाद्यपदार्थको रूपमा आर्गुलालाई लिइदैँ आएको छ। अहिले अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेअनुसार आर्गुलाको हरियो पातमा विभिन्न खनिज तथा एन्टिअक्सिडेन्टहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, जसले कामेच्छमा अवरोध पुर्‍याउने केही वातावरणीय संक्रामकहरूलाई हाम्रो शरीरमा आउनबाट रोक्दछ।
५. अन्जिर (नेभारो)
प्रजनन क्षमता वृद्धि गर्ने खाद्यपदार्थको रूपमा अन्जिरले लामो इतिहास बोकेको छ। त्यसैगरी अन्जिर उत्तम कामोद्दीपक पनि मानिन्छ किनभने यसमा घुलनशील र अघुलनशील दुवै प्रकारमा फाइबर पाइन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ। थप कुरा के भने फाइबर बढी भएको खानेकुराले भुँडी नलाग्ने हुनाले आकर्षक समेत देखिन्छ।
यस फ्यामिलीमा कागतीजस्ता अनेकौँ फलहरू पर्छन। साइट्रस भिटामिन सी, एन्टिअक्सिडेन्ट र फोलिक एसिडमा अत्यन्तै धनी मानिन्छ। यी सबै तत्वहरू पुरुषहरूको प्रजनन स्वास्थ्यका अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ।